Waldaan Maccaa fi Tuulamaa deebi’ee banamuun isaa gammachuu ilmaan Oromoo hundaati jedheen amana! – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosWaldaan Maccaa fi Tuulamaa deebi’ee banamuun isaa gammachuu ilmaan Oromoo hundaati jedheen amana!
Waldaan Maccaa fi Tuulamaa deebi’ee banamuun isaa gammachuu ilmaan Oromoo hundaati jedheen amana ABOn waan inni gaafate keessaa gaaffii tokkodha, garuu waan tokko jechuun barbaadaa.
OPDOn sinsinnooftuun hogganoota ABO biyyatti deebisuuf sirbitee simatte, turtee bultee hogganoota hidhuu dararsuu, waajjira cufuu, qabeenya waajjiraa saamuu, Ati ABO baatee simatteetta jedhanii sabboontota qara dabarsaa jiraachuun isaanii ifaadha, har’a gaaffiin ABO waajjira Maccaa fi Tuulamaa bansiisuu gaaffii uummata bal’aa Oromoo waan ta’eef baanuun isaanii dirqama dha.
Garuu hara’a waajjira Maccaa fi Tuulamaa banteetti sinsinniin torban tokkoo fi lamaa yeroo dhumu kan namoota achi dhaqan ariyatu, doorsisu, hidhu, gidirsu, ukkaamsu isaanumadha. Kun immoo dhiyootti kan ta’u danda’udha
‎Dandi Bore‎ to Oromo Liberation Front(ABO-OLF)
#Junadiin_Sadoo an maacaaf Tuulmmaa addaan diigee #Qeerroo_Amboo ficisisaa akka turee hin yadatama. Sanyii dugugaa irrati akka hirmatee namni kuni fi Abba Dullaa Gamadaa Oromo Jiiduugaleesaa fi Welega irrati godhani seennan yomiyuu hindagatuu.
Juundin Sadoo amma maqaa OPDO tin Oromiyaa galee nagadhan jiiraata. Warri qabeenya Oromo konkoolata badhasani suun Oromo an ficisisaa turani dha. Namni kuni yeroo amma naga dhan akka jiruu beekna . Eega maale godhuu sirna OPDO keesa jira amma OPDOn haqamtuti ha jiratuu. Ha taa’uu …
#Maacaa_Tuulamman lamata ijjaramuun isa bayy’ee nama gamachisaa .
Dhimmi Waldaya Maccaaf Tuulamaa opdo wanni wacabbarsiisuuf maali dhiiroo?
Warri Waldaa maccaaf Tuulamaa Offisa keechan Oromiyy/Finfinneetti baga banattan”baga gammaddan”
Dokimantarii haala yeroo irratti qophaawe. Maatiin Miidiyaa OBN galata guddaa qabdu!
ልደቱ ኣያሌው ይናገራል
ኣሁንም ማን እየመራን እንዳለ ኣናቅምምምምም
Lalisaa Hiikaa jijjiiramicha leellisuu isaati.
Harroota OPDO fi OPDO irraa waan gaarii hin eegnu duruu.